China Chain Link Fefy Ho an'ny mpanamboatra sy mpamatsy fampiharana an-trano | Pro Fefy
Fefy Chain Link Ho an'ny fampiharana ara-barotra sy trano
Ny fefy rohy dia antsoina koa hoe harato tariby, fefy tariby, fefy tariby, fefy sikilona, ​​fefy rivo-doza, na fefy diamondra-harato. Izy io dia karazana fefy vita amin'ny tenona izay matetika vita amin'ny tariby vy nandrisika sy ny fefy perimeter malaza any Canada sy Etazonia.
Ny fanamboarana fefy rojo dia antsoina hoe fanenomana. Ny tariby dia mihazakazaka miorim-paka ary miondrika amin'ny lamina zigzag ka ny "zig" tsirairay avy dia misy tariby avy hatrany amin'ny lafiny iray ary "zag" avy hatrany miaraka amin'ny tariby avy eo amin'ny ilany hafa. Izy io dia mamolavola endrika diamondra mampiavaka ny fefy rohy. Ny PRO.Fence dia manamboatra fefy rojo misy rojom-bolo mafana atsobika dia ny dingan'ny fampidirana paty zinc miaro amin'ny vy mba hampihenana ny harafesina sy harafesina. Izahay koa dia manome ny fefy rojom-baravarankely vita amin'ny vinyl izay vita tamin'ny tariby nandrisika nopetahany vinyl. Ny ankamaroan'ny karazana fefy rojom-pifandraisana dia matetika apetraka amin'ny tongony beton. Saingy ny PRO.Fence dia afaka mamatsy ny antontan-tany fa tsy hampihena ny dian-tongotry ny karbaona sy hitehirizana ny fotoana fametrahana azy. Ankoatr'izay, ny PRO.Fence dia manana ekipa R&D afaka mamolavola vokatra mifanaraka amin'ny tsena mba hahafahana manome karazana fefy rojo isan-karazany.
Fefy rohy no rafitra fencing malaza indrindra, be mpampiasa ary eken'ny besinimaro amin'ny fampiharana trano, varotra ary indostrialy. Mety ho hitanao manodidina ny tranobe, kianja filalaovana tenisy, kianja filalaovana basikety, sekoly, toeram-pivarotana, zaridaina sns.
PRO.Fence dia manome fefy misy rojo vy mifono vy na vovoka feno ary amin'ny haavo sy famaritana isan-karazany.
Harato: 60 × 60mm
Haben'ny tontonana: H1200 / 1500/1800 / 2000mm，30m / 50m anaty horonana
Paositra: φ48 × 1.5
Fototra: vongan-tongotra / visy vita amin'ny beton
Vita: nopetahany savony / vovoka mifono (Brown, Mainty, Green, White, Beige)
Fefy rohy no fefy ara-toekarena indrindra raha oharina amin'ny fefy hafa satria ny vidin'ny fametrahana ambany indrindra. Ny famolavolana azy dia ahafahana mametraka sy manamboatra mora foana raha toa ka simba ny ampahany amin'ny fefy. Ny fefy rohy dia safidy mety indrindra raha ny tetibola no miahiahy be anao.
Ny fefy rohy dia mety amin'ny haavo samihafa, ny refy samihafa ary ny loko rehetra. Na ny firafitra aza dia azo ahitsy amin'ny fampiharana hafa.
Ny firafitry ny tenona misy tariby vy misy fihenjanana ambony dia mety hanoherana ny fikororohana ivelany, ary ny elanelan'ny zig dia manome ny lalan-drivotra na ny lanezy mba hisorohana ny fefy amin'ny fahasimban'ny toetr'andro.
Ity fefy vy matanjaka ity dia mety hiteraka sakana azo antoka ho an'ny fanananao. Ity fefy misy rojo rojo ity dia azo atambatra ho 20ft ny haavony raha ilaina ary asio tariby misy barbed eo an-tampony hisorohana ny fiakarana.
Item TSY: PRO-08 Fotoana fitarihana: 15-21 ANDRO Orginan'ny vokatra: CHINA
Fandoavana: EXW / FOB / CIF / DDP Seranan-tsambo: TIANJIANG, CHINA MOQ: 20rolls
Teo aloha: Trolley tranofiara mavesatra ho an'ny fitaterana sy fitahirizana fitaovana （3 Sided）
Manaraka: Fehin-tsarimihetsika BRC miorina amin'ny fefy maritrano
Fefy vy tariby
Fambolena fiompiana omby, ondry, serfa, soavaly